internet | ဇော်မျိုး
အင်တာနက်အတွင်း software နှင်. သီချင်းများ ၇ှာဖွေခြင်း….
အင်တာနက်အတွင်း software နှင်. သီချင်းများ ၇ှာဖွေခြင်းစာအုပ်ပါ။ အင်တာနက်မှာ သီချင်းတွေလွယ်လွယ်ကူကူ ၇ှာတတ်အောင် ဒီစာအုပ်လေးက ဖော်ပြပေးပါလိမ်.မယ်။ ကိုယ်တိုင်၇ှာတတ်တော. သူများ အားကိုးစ၇ာ မလိုတော.ဘူးပေါ.ဗျာ၊
အဆင်မပြေ၇င် ကွန်.မန်.လေး ချန်ခဲ.ပေးပါ။